Muslimiinta 'way ka soo horjeedaan rabshadihii Cartoons-ka' - BBC News Somali
Muslimiinta 'way ka soo horjeedaan rabshadihii Cartoons-ka'
25 Febraayo 2015
Inta badan Muslimiinta Britain, ayaa ka soo horjeeda rabshadaha lagula kaco kuwa daabaca sawirada nabiga (CSWW), waxaa sidaas muujisay codayn BBC ay samaysay.
Codbixinta ayaa sidoo kale muujisay in intooda badan aysan u beer jileecin kuwa doonaya in ay la dagaalamaan danaha reer galbeedka.
Balse, 27% ee 1,000 Muslimiin ah oo cod ay ka qaadday hay'adda ComRes ayaa sheegay in ay u beer-jileecaan sababaha keenay weeraradii Paris ka dhacay.
Ku dhowaad 80% waxay sheegeen in ay weerar toos ah u arkeen daabacaadda sawirada nabiga (csww).
Halkan Dhag sii aad aragti Codbixinta oo rasmi ah
Coddaynta Muslimiinta UK
dareensan daacad u ahaansho Britain
Way adeecayaan shuruucda Britain
46% Dareensan in la gacan bidixeeyo Islaamka, dhibaatona ay ku tahay Muslimiinta
78% Way ka caroodeen muuqaalka nabi Muxamadda (CSS) in la daabaco
11% Niyadda ka taageersan dadka doonahay in ay la dagaalamaan danahay reer galbeedka
ComRes codaynta ee BBC
Markii la waydiiyay in falalka rabshadaha lagu qaaddo kuwa daabaca sawirada nabi Muxammad (cs), 'waligeed la sababayn karo', 68% waxay ogolaadeen in aan marnaba la sababayn karin.
Balse 24% ma ogolaan qoraalkaas, iyadoo kuwo kalena ay ku jawaabeen 'ma garanayno' ama diideen in ay ka jawaabaan.
Codbixinta, ayaa la fuliyay intii u dhaxaysay 26 Janaayo iyo 20 Febraayo, waxay muujinaysaa 32% ee muslimiinta Britain in aysan la jaawaabin weerarkii dhacay January ee lagu qaaday Magaziinka maadda ee Charlie Hebdo, oo daabacay sawirada nabiga iyo suuqwaynaha kosher ee Paris.
Codbixinta ayaa sidoo kale muujinaysay in kala bar muslimiinta Britain ay rumaysan yihiin in la isir sooco, sababo la xiriira diintooda iyo in Britain ay noqonayso mid uu sii yaraanayo dulqaadkodoa, iyadoo in boqollaydaas ay dareemayaan in ay Muslimiin la gacan bidixeeyo, oo nolosha Muslimka ee UK ay sii adkaanayso.
Ilaa 35% waxay sheegayaan in ay dareemeen in inta badan dadka Britain aysan aaminaysanayn Muslimiinta, shan meelood meel waxay sheegeen in ay rumaysan yihiin reer galbeedku in ay yihiin bulsho fururan oo ay marnaba aan la falgali karin Islaamka.
Kuwa codeeyay, 95% waxay daremeen in ay daacad u yihiin Britain, halka 93% ay rumaysan yihiin in Muslimiinta Britain ay tahay in sidoo kale ay adeecaan shuruucda Britain.
Ku dhowaad 20% ee dumarka muslimiinta ah ee la su'aalay, waxay sheegeen in aysan dareemin amnia gudaha Britain, marka la barbardhigo 10% ragga codeeyay.